24 | July | 2012 | Dr Ko Ko Gyi's Blog
Zohara Khatun says she and her family ran for their lives – her father was killed
Rohingyas recount terror of Burma clashes By Anbarasan Ethirajan BBC News, Teknaf, near Bangladesh-Burma border
ပါကစ္စတန် လူ့အခွင့်အရေး ခေါင်းဆောင် ရခိုင်ပြည်နယ် လာမည်
OIC Muslim countries should warn CHINA and Russia not to use the VETO. If they don’t agree just abstain from voting or could vote against the UNSC resolution.
Why Mizzima addedashit at the end?
Why need to mention the rape case which could beaset-up by Radical Terrorists to use asalame excuse to start killing Muslims.
Why end with the shameless FALSE news that persons who killed 10 Myanmar Muslims are punished.
Where are the news naming in person and labeling as TERRORIST MURDERER Bama Buddhists or Radical Rakhine Buddhists. And WHERE R the Masterminds who arranged the mass killings?
Why never mention the numerous anti-Muslim activities especially those 5-6 cases around Myanmar?
Why never mention the Hate Speeches repeatedly spread in Myanmar MSM and online? (more…)
Tags:Ansar Burney, Burma, India, Islam in Burma, Mohammad Khazaee, Myanmar, OIC, Pakistan
Tags:Aung San, Aung San Suu Kyi, Burma, Rakhine, Rakhine people, Rakhine State, Rohingya, Rohingya people
Myanmar Muslims’ stand on request by our Myanmar ‘friends’ to help defend the ugly international image of Myanmar
Source : FB pic of M Thit Sar. TQ I agree with you.
Source: News@M-Media ဂျီနိုဆိုဒ်အတွက် တဘက်လှည့်သွေးထိုးမှုကြီး
ဇူလိုင် ၂၃ရက်၊ ၂၀၁၂ By Daniel Shane
I added the screenshot of FB of Hmu Zaw, President’s office Director, who is openly writing the Hate Speeches INCITING Genocide on Rohingyas.
“ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပါမှတ်စုကို အလဲဗင်းမီဒီယာဂရုက သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အော်ဖီရှယ် Facebook Page မှာ တရားဝင်တင်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ် အကောင့်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးပါ။
အဲဒီမှတ်စုမှာ “ဘင်္ဂါလီမ၊ ကျပ်မပြည့်၊ သူငယ်နာမစင်၊ ကော့ကော့ပြ၊ စားမြုံ့ပြန်” စတဲ့ standard media တစ်ခုအနေနဲ့ တည်းဖြတ်သင့်တဲ့အသုံးအနှုံးတွေအပြင် ကျုပ်တင်ပါး ဘယ်သူ့မစင်ဆိုသလို ဆီယိုပေါက် အပြစ်ရှာ၊ ဟိုမွတ်စလင်မ်အချင်းချင်းတောင် ဒီလိုလုပ်တာ ကျုပ်တို့လုပ်တော့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့သဘော မျိုးတွေ အပြည့်ပါနေယုံတင်မက ကိုဆိုဗို၊ ဘော့စနီးယားသမိုင်းကို ပြောင်းပြန်လုပ်ပြီး ခါးတောင်းတခြား တင်ပါးတခြားဥပမာပေးပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
Inside Story – Why is the world ignoring Myanmar’s Rohingya?